Ra’iisul Wasaaraha Britain oo cambaareysay qarixii ka dhacay waddo Treen | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ra’iisul Wasaaraha Britain oo cambaareysay qarixii ka dhacay waddo Treen
Ra’iisul Wasaaraha Britain oo cambaareysay qarixii ka dhacay waddo Treen
Muqdisho(SONNA) Qaraxani oo maanta ka dhacay wado Treen oo dhulka hoostiisa marta ayaa ka dhashey khasare dhaawac ah,waxaana dadka dhaawacmay ay ahaayeen dakii ku safrayay wadadaasi iayadoo ay ka hadashey arintaasi raiisul Wasaaraha dalkaasi Ingiriiska.
Ilaa 20 qof ayaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen qaraxasi oo ka dhacay xarunta dhulka hoostiisa ee tareenada laga raaco ee Parsons Green ee magaalada London,waxaana halkaasi baaritaano ka wada ciidamada Booliska.
Ra’iisul Wasaaraha Dalka Britain Theresa May ayaa si kulul u cambaareeysay weerarkaasi,waxayna ku tilmaantay mid fulaynimo aph, lana doonaya in waxyeelo intaasi ka ballaaran lagu geysto.
Shir deg deg ah oo ay shir guddoominaysay ayaa ka dhacay magaalada London,waxayna sheegtay in digniinaha falalka argagixisada ee dalkaasi ay sii kordhayaan, balse waxay intaasi ku dartay in sare loo qaadidoono tirade ciidamada ammaanka oo ka hortagaya khataraha nuucaan oo kale ah.
Laamaha ammaanka Dalka Britain ayaa sheegay in falkaasi uu yahay fal argagixisanimo ah,islamarkaana ay soo baari doonaan, si loo ogaado,warar kala duwan ayaa ka soo baxaya waxaana la sheegayaa in qaraxaasi uu yahay mid macmal ah oo guryaha lagu dhexsameeyay.
Previous articleMareykanka oo Dowladda Soomaaliya ku amaanay horumarka laga gaaray hanaanka Dimoqraadiyada
Next articleMadaxweyne Axmed Madoobe oo la kulmay maamulka iyo bulshada Degmada Doolow ee Gobolka Gedo